Webiga Niil: astaamaha, kaabayaasha, muhiimadda, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 05/08/2021 10:00 | Ciencia
El Webiga Niil Waa webi caalami ah, dhererkiisu ka badan yahay 6000 kiiloomitir, kaas oo ka gudba toban dal oo ku yaal qaaradda Afrika. In kasta oo muddo dheer loo tixgeliyey webiga ugu dheer adduunka, haddana wuxuu ku jiraa kaalinta labaad, waxaa ka sarreeya Amazon ka dib markii uu dib u qeexay asalkiisa. Waxay had iyo jeer u ahayd il muhiim u ah nolosha dadka deggan dooxaddeeda, siinta bacriminta hodanka ah iyo u adeegidda horumarinta ilbaxnimadii hore ee Masar. Waxay kaloo saamayn ku leedahay dhaqaalaha, dhaqanka, dalxiiska iyo nolol maalmeedka qaaradda Afrika.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa dhammaan astaamaha, dhirta, fauna iyo muhiimadda Wabiga Niil.
2 Hanjabaadaha iyo isha webiga Niil
3 Wabiyada Wabiga Niil
Wabiga Niil waa webiga labaad ee ugu dheer dunida, dhererkiisuna waa 6.853 kilomitir. Waddadeeda waqooyi-koonfur waxay ka gudubtaa 10 dal oo Afrikaan ah. Waxay leedahay weel qiyaas ahaan 3,4 milyan oo kiilomitir oo laba jibaaran, kaas oo xoogaa ka badan 10% aagga dhulka Afrika. Ballackeeda ugu sarreeya waa 2,8 kiiloomitir. Maadaama inta badan dhulka uu maro webiga Niil uu yahay mid qalalan oo aad u yar roobka. Wabigani wuxuu noqday webi qalaad. Taas macneheedu waxa weeye qulqulka biyaheedu wuxuu ka soo jeedaa biyaha halkaas oo cimiladu ku habboon tahay roobka.
Nidaamkiisa webiga wuxuu ka kooban yahay laba webi, wabiga Niilka Cad wuxuu ka dhigan yahay 80% iyaga iyo wabiga Niilka Buluug wuxuu ka dhigan yahay 20% xilli -roobaadka. Dooxada Niil waa mid ka mid ah dooxooyinka webiyada ee ugu wax -soo -saarka badan dadka deggan aaggaasina way beeran karaan.
Waxaa jiray qowmiyado badan oo ku noolaa xeebaheeda taariikhda oo dhan, sida siruk, nuer iyo suufi. Iyada oo ay ugu wacan tahay caqiidooyinkooda kala duwan (Muslimiinta, Masiixiyiinta Orthodox, Yuhuudda, caadooyinka Coptic, iyo diimaha kale), waxay ku noolaayeen waqtiyo nabadeed iyo dagaal.
Webiga Niil ayaa marba dhinac u leexdo, meelaha qaarna cidhiidhi ku noqda, meelaha kalena ku fidaa. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto biyo -dhac intaad jidka ku jirto, in kasta oo laga yaabo in lagu dhex mari karo qaybo kala duwan, way adag tahay in la maraa iyada oo ay ugu wacan tahay deg -degnimadiisa qaybaha kale.
Marka laga reebo midabka xariifka ah ee laga arki karo waddada Niilka Cad, Biyaha Niilku guud ahaan waa buluug, oo aad uga duwan jaalaha lamadegaanka iyo cagaarka timirta. Wabigu wuxuu sameeyaa jasiirado yaryar, oo qaarkood ay yihiin goobo dalxiis.
Hanjabaadaha iyo isha webiga Niil
Khatarta ugu weyn ee webiga labaad ee ugu dheer adduunka waa wasakhda ay la kulanto, maxaa yeelay in kasta oo la isku dayay in la sameeyo xeerar lagu xaddidayo qashinka lagu shubo biyaheeda, haddana warshadaha iyo hoteellada ayaa weli la kulma dayacaad noocaas ah.
Sidoo kale, uumi -baxa soo kordhay ee ka yimaada Wabiga Niil ayaa dedejinaya geeddi -socodkan wasakhaynta, ma aha oo kaliya inuu halis geliyo dadka ku tiirsan biyaheeda si ay u noolaadaan, laakiin sidoo kale waxay halis gelinayaan noolaha ku nool wabiga Niil iyo deegaanka ku xeeran.
Dhalashada marwalba waxay ahayd mowduuc la isku khilaafsan yahay, maxaa yeelay in kasta oo sahamiyeyaasha qaarkood, sida Burkhart Waldecker oo Jarmal ah, ay ku andacoodaan in Niilku ku dhashay Wabiga Kagera, qaar kalena waxay rumeysan yihiin inuu ka yimid Harada Victoria. Qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga C. Waxaa la rumeysan yahay in uu ka yimid barafka Rovenzori.
Wabiyada Wabiga Niil
Ma jiro wax la isku raacsan yahay oo ku saabsan halka uu ka soo jeedo Wabiga Niil, maxaa yeelay in kasta oo harada Victoria ay tahay mid ballaaran, haddana waxaa bixiya wabiyada kale sida Wabiga Kagera ee galbeedka Tansaaniya. Taa baddalkeeda, tan waxaa sidoo kale bixiya isha, Webiga Rukarara (Rukarara), kaas oo loo bixiyey markii uu soo galay Kagera.
Ilaha kale ee Wabiga Niil ee ka durugsan waa Wabiga Luvyironza, oo ku shuba Wabiga Ruvubu kuna biira Webiga Kagera, ka dibna ku shuba Harada Fiktooriya. Kani waa ilaha ugu da'da weyn ee la yaqaan wuxuuna weli yahay mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn koonfurta Nile. Waqtigan xaadirka ah waxaa bilaabmaya qaybta dhexe ee wabiga Niil ama qaybta dhexe ee wabiga Niil. iyadoo dhererkeedu yahay qiyaastii 1.800 kiilomitir.
Ugu dambayntii, wabiga Niil wuxuu ku qulqulaa badda Mediterranean -ka isaga oo mara webiyaashiisa, wuxuuna samaystaa wabiga Niil Delta, oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn dunida. Waa dhul baaxad leh oo bacrin ah oo ku yaal waqooyiga Masar, oo hore loogu yiqiin Masar Hoose, oo leh cufnaan dadweyne aad u badan kuna habboon horumarinta beeraha. Waxaad ka arki kartaa khariidada afka wabiga Niil ee hoose.
Wabiga Niil wuxuu inta badan xiriir la leeyahay Masar iyo magaalooyinkeeda, laakiin wuxuu dhex maraa 10 dal oo Afrikaan ah guud ahaan: Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, South Sudan, Sudan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Ethiopia, iyo Masar lafteeda.
In kasta oo cimilada webiga Niil ay dhawr mitir oo keliya u jirto lamadegaanka, haddana biyaheeda bacrinka ahi waxay u oggolaadaan in dhirta ku dhow ay tarmaan, haddana looma isticmaalo ujeeddooyin -beereed, laakiin sidoo kale tusaheeda ugu weyn waa dhirta papyrus, waana sababta loo isticmaalay ka hor inta aan la helin warqad.
Intaa waxaa dheer, aaggu wuxuu caan ku yahay caws aad u badan iyo noocyada dhaadheer sida cawsha iyo bamboo. Noocyada geedaha laga helay raadka waxaa ka mid ah Spin Hasab, ebony, iyo prairie acacia, oo gaari karta ilaa 14 mitir.
Wabiga Niil wuxuu nooleeyay nooleyaal kala duwan wuxuuna la jaanqaaday xaaladaha nololeed ee heer-kulka sare leh. Naasleyda waxaa ka mid ah shimbiraha, maroodiga, gariga, caanaha, buffalo, iyo shabeelka.
Noocyo ay ka mid yihiin herons cawl, guluubyo cufan, koormo weyn iyo qaadooyin caadi ah ayaa laga helay xayawaanka digaagga. Waxaa ka mid ah xamaaratada, qorraxda kormeerka Nile, yaxaaska Niil ee labaad ee ugu weyn dunida, iyo qoolleyda qoorta ayaa si gaar ah caan u ah. Webiga Niil wuxuu hoy u yahay ku dhawaad ​​129 nooc oo kalluun ah, 26 ka mid ah waa kuwo aan dhammaad lahayn, taas oo macnaheedu yahay in kalluunkaas oo keliya ay degaan.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto webiga Niil iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Webiga Niil